Ko vhidhiyo inoshanda nevanyori vanyori uye vanotengesa PsyOp mabasa sezvavanoita nemitambo yeTV? : Martin Vrijland
DIRECT (pasina PayPal)
Ko vhidhiyo inoshanda nevanyori vanyori uye vanotengesa PsyOp mabasa sezvavanoita nemitambo yeTV?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 15 May 2019	• 11 Comments
Chero ani zvake akatevera chikamu cheAnner Faber uye achangobva kuona julie van Espen nyaya muBelgium munhau dzinofanira kunge dzakacherechedza kuti pane zvimwe kana zvakafanana nemamiriro ezvinhu akafanana. Kana tikatevera vhidhiyo, iyi nhau ndeyechokwadi. Isu takasvibiswa nemifananidzo inosimbisa kutendeseka uye isu kwete chete kuona mhuri neshamwari, asi tinoonawo mafananidzo chaiwo uye mavhidhiyo evanhu vanonyanya kutaurwa, izvo zvinoreva kuti hazvikwanise kuva imwe kunze kwechokwadi. Munyaya iri pasi apa, ndinoedza kutsanangura chikonzero nei iwe uchiri kungofanirwa kutsvaira musoro wako.
Kutanga sumo pfupi.
Takazvinzwa nezve "factory factory" kana kuti 'troll army', asi ivo vari muRussia (mhizha inotitaurira). Zvisinei, ruzivo rwangu nderokuti mauto eti troll anowanzo muNetherlands. Iwe hausati uchitarisa izvo zvakanyanya mumhinduro dzangu, nokuti ndinozvichenesa zvachose ndichishandisa self-set word word. Ngatitii kana hurumende dzichishanda nePyyOp (kushanda kwepfungwa) uye dzinotengesa izvi kubudirira 'mhiri kumuganhu' (nokuti yakawana zvakanaka munyika yavo), unoda boka guru re troll kuti uwane mhinduro mumhando dzose dzeforamu uye kukurukurirana kwevekudyidzana mune zvekugarisana media "kuongorora". Vanogona kutumira hurukuro yacho kuburikidza nemhinduro dzakadai sekuti "Ndaimuziva" kana kuti "aive neshamwari yangu pahofisi" uye mamwe mazwi akawanda.
Vanhu kazhinji havatarisi kuti Facebook chii chinonyadzisa kupindura. Havasi nguva dzose vanofanirwa kuva nhoroondo dzezvakaipa; iyo inogonawo kuva vanhu chaivo varipo.
Iwe unogona kunge wakanzwa nezvezwi rinonzi Inoffizieller Mitarbeiter. Pasi peStasi yeEast Germany GDR, avo vaive vanyararire, vashandi vekuvanda avo, somuenzaniso, vakaramba vaine ziso kune vavakidzani vavo. Izvo zvakanzi ndeye makumi mashanu panguva iyoyo. Iwe unogona kutenda kuti chiitiko ichi chakanyangarika kubva pachiso chenyika mushure mekubatanidzwa kweEast neWest Germany. Handina chokwadi pamusoro pazvo. Handisi kutonga kunze kwechikonzero chekuziva kwangu nemhinduro dzose pamusoro pemakore - kuti Netherlands ine boka guru re troll rakagadzirira kutora hurukuro dzezvemagariro evanhu nekuda kwechinyorwa chinyorwa.
Waiziva here kuti John de Mol ndiye anopa ANP? Unoziva here kuti John de Mol akava mupfumi sei? Kakawanda kuburikidza nekutengeswa kwezviratidzwa zveTV zvinobudirira. Iwe unovaziva kubva pane izvo zvinoratidza seHolland's Got Talent. Izvo zvino zvinoedzwa kune mamiriyoni mashomanana eDutch vanhu uye kana vakabata, vanotengeswa kumucheto semafungiro uye vakagamuchira zvakanaka. Panguva yeZaanse vloggersrel, ndakakwanisa kufungidzira (nekuda kwezvifananidzo zvakawanikwa neshamwari yaigara munharaunda) kuti Powned yakaoma sei kubasa kutungamirira vloggersrel yakagadzirwa. Zvave zvakajeka kuti kwaive nekururamisa. Zvakanga zvakajeka zvakare kuti, somuenzaniso, kusungwa kwakatora kwenguva refu, nokuti cameraman aifamba achienda kunzvimbo yakarurama. Nguva pfupi yapfuura, vashandi vakanga vachikakavadzana pamberi pekamera vakanga vachiseka kuseka uye kutora selfies mumwe nomumwe. Iyo Zaanse vloggersrel yakanga yakanyatsogadzirwa uye yakatungamirirwa kurarama. Mifananidzo iyoyo iwe unogona pano onazve.
Ndakagara ndichikurukurirana maitiro ayo inonyanya kugadzirirwa vanhu. Ndinoda kudzokorora izvozvo kune vatsva vatsva. Deepfakes inogadzirwa kuburikidza neGAN software. Iyi ndiyo software inonzwisisika yakajeka iyo, zvichibva pane dzimwe nzira dzeAI mumutambo, inogadzira vanhu vasina chinhu. AI chiChirungu cheArtificial Intelligence; chii chinomirira kuchenjera kwepfungwa. Mumwe weAI network ndiye anoedza mifananidzo yakagadzirwa nekutanga network uye inoramba kana kuvabvumira. Nokuita izvi mumutambo, vanhu vanowedzera kuitika pane imwe neimwe, kuitira kuti mugone kupedzisira maita vanhu vese vanofananidzira avo vanoita sevanhuwo zvavo (iwe ungangosangana mumugwagwa). Kwemakore makambani emafirimu ave akakwanisa kugadzira vasiri vanhu vasiripo, mumiririri wemadhidhiji ane mafirimu NVIDIA akachengetedza kuti iwe unokwanisa zvakare kuita izvi pamutambo wePc game.ona pano). Imwe kambani (NVIDIA) inokwanisa kugadzira nzvimbo dzakakwana. Tarisa vhidhiyo iri pasi apa uye enda mberi kuverenga.
Iye zvino panewo purogiramu pamusika waunogona kupa hurukuro iripo kubva shure kwe webcam paPC yakawanda uye kuisa zvose chiso uye inzwi reumwe pamusoro pazvo. Izvi zvinoitwa munguva chaiye uye pasina kukanganisa. Unogona kuona izvi pasi (famba uchiwedzera pasi pevhidhiyo).
Kana iwe ukawedzera zvese izvi zviripo pamwe chete, saka unogona kugadzira chero munhu waunoda, uye iwe unogonawo kuumba nhoroondo yacho uye kuita kuti zvose zviite sezvinoita upenyu. Unofungidzira, somuenzaniso, unogona kubudisa vhidhiyo yaAnnifer kubva mumakore mashomanana apfuura, pamwe nababa vake mumotokari, uye kuita kuti munhu wose atende kuti izvi ndezvechokwadi. Kana kuti izvo zvingave zvisingafungidziri, asi izvi ndizvo zvinongoitika mukuita? Iwe unogona kuzviongorora here? Tinogona kuva nechivimbo chokuti hurumende uye vhidhiyo havasi kubudisa nhau dzinonyengera uye tinogona kutenda kuti zvivande zvakavanzika zvirikudzidzira nzira dzekuona zvakadzika, asi hazvisi ivo vadzidzisi vezvakawanda zvakadaro here?
Saka kana John de Mol, mabhiriyoniire, guru rekubudisa TV uye muridzi weAnp (General Dutch Press Agency) angangodaro ane zvigaro zvepamusoro uye saka anofanira kuonekwa achikwanisa kuunza yakadzika, saka tinofanira kuseka kana mumwe munhu akasimuka iwe unotsanangura kuti kune chiitiko chokuti tinogona kunyengedzwa? Ini, zvakare, ndakaratidza kakawanda (nokuti handina kuratidza pane zviratidzo inotsigirwa nemashoko ekuona isu takanyengerwa). Zvichida here kuti zvakashata kuti script yakadai, sehurukuro huru yeTV, inotengeswa kune imwe nyika, nokuti yakaratidza kuti iri kubudirira?
"Hungu, asi Vrijland, inofanira kuva nechinangwa chokunyengedza vanhu pamwero wakakura zvakadaro? Ndiani anoita chinhu chakadaro!"Ipapo iwe unofanirwa kubhadhara kune mitemo mitsva iri kushandiswa, nguva pfupi mushure mechiitiko chakadai chakadai seAlin Faber mhosva. Mune zvinyorwa zvinyorwa ndakatsanangura kuti nei Anne Faber mhosva (umo Michael P. akanga ari mutambudzi) yakangodaro yaiva PsyOp (kushanda kwepfungwa). Mushandirapamwe wokudhonza nemimwe mitemo. Mutemo wekuti vanhu havangambogoni kumira mumamiriro ezvinhu chaiwo. Nokuda kweizvi, chimwe chinhu chinofanira kunge chakaitika zvakanyanya.
Dambudziko, Reaction, Solution
Rega nditange nekutsanangura zvakare kuti vhidhiyo vanogona sei kutamba iyi game yePyyOp uye chii icho Dambudziko, Reaction, Solution chirevo ndechekuti inoratidzika kushandiswa nguva uye nguva zvakare uye kuti tione zvatinoona izvi muJulie van Espen uye Steve B. mhosva.
Chii icho icho chirevo ipapo Dambudziko, Reaction, Solution? Zvamunoita hurumende zvinoita ndezvi: Unogadzira dambudziko revanhu pamwe nehuwandu hukuru (Dambudziko) inokonzera kutyisa kwemanzwiro pakati pevanhu (kuita) uye inogona kuita mitemo mitsva nezviyero zvisingambogamuchiriki (mhinduro). Iwe unobva wavhara iyo mumashoko akadai se "Hurumende yakundikana mukuchengetedzwa kwevanhu vanogona kutarisira kubva kune iyo", Sezvachangobva kubva kuDutch minister Sander Dekker.
Iwe unogona naizvozvo kushanda nehutano hwakatsanangurwa pamusoro apa kuti uite dambudziko rakadaro. Zvechokwadi, zvinoreva kuti iwe haugoni kuedza chero kubvunzurudza, kutaura kana chero mufananidzo chero upi zvawo nokuda kwechokwadi. Saka iwe haugoni kutenda maziso ako zvakare. Terevhizheni nemamwe mhizha zvinokwanisa kukwanisa kufema hupenyu kune zvisiripo. Kunyange kana iwe uchifunga kuti yakanyorwa nefoni uye kana ichibva kune chekuchengetedza kamera, haugoni kuva nechokwadi chokuti ichokwadi. Zvose zvinogoneka uye hapana chinhu chisingaitiki munyika yezvinobudisa nhau. Iwe unofanirwa kuchengeta nguva dzose mhinduro rinotevera nguva pfupi mushure mechiitiko ichocho chikuru.
Mubvunzo mutsva pachikwata cha Anne Faber
"Asi Vrijland, kuponda kwaAnn Faber kungangove kwakangoitika chaizvoizvo here?"Hungu, iwe unogona, chete mumakoronga ezvinyorwa zvandakanyora pamusoro pazvo (ona pano) Yakave yakanyatsojeka kuti yakava nyaya yakaoma zvikuru. Ikoko musikana wechidiki anotora bhasikoro kuti atange nemhepo inofanotaurwa uye ozotanga motokari an ANWB uye nei chikafu chake chikawanikwa pa 3 October uye zvakatora mazuva 6 nokuda kweDNA musangano naMichael Panhuis kuti aonekwe? Izvozvo hazvisi izvo zvakarurama. IFI inokwanisa kuita izvozvo kuti uite mumaawa e6. Sei Mikaeri akaparadzira zvinhu zvose zvakawanikwa zvakapoteredza uye zvakadini nekuva kwake? scooter ride na Anne Faber mushure? Sei akave akavigwa pakutanga ndokuzopiswa uye zvakare zvakare kuvigwa? Sei chiitiko chekuongorora nezvekunyora uye kupupurira kunoshuma kwete kuratidzwa munyaya yekutongwa? O, zvakanaka, uye pane zvakawanda zvisinganzwisisiki munyaya iyi, asi zvikurukuru nokuti wakaona mifananidzo yevabereki vane manzwiro, iwe watendavira mairi. Nyaya inonakidza pamwe nekuchengetedza pfuma (Dambudziko) mafungiro akanganisa vanhu zvikuru uye saka yakava mune kuita kuitira kuti vagamuchire mutemo mutsva (mhinduro). Izvi zvinogona kuitika zvino nemwana wako kana zviitike iwe pachako zvakare:
Dekker anozviti 'haifaniri chaizvo' kuti vanofungidzirwa vanoda kurapwa muTBS iyo inogona kupukunyuka nekusawirirana nekutsvaga uye kuti izvi hazvigoni kuitika.
Mukuwedzera, kuongororwa kwehutano kwakagadziriswa uye kuongororwa kwemhosva kunogadziriswa. Zvinokonzerwa nekambani kana kupa rusununguko kune vasungwa kunonyanya kukosha.
Muchidimbu: kutsvakurudza mune zvepfungwa kunobvumirwa uye zvino tinofunga nezvaMichael Panhuis uye saka tinogutsikana nezvinodiwa. Ichokwadi kuti kune vagari venyika izvi izvi zvinogona kureva kuti vachaiswa panzvimbo yehupenyu hwehupenyu (uye nokudaro vanorasikirwa nekodzero dzevanhu vose), mushure mokunge vawana kuongororwa kunotarisirwa, zvinoreva kuti ani nani anoda kuongorora mafungiro ehurumende achada inogona kutaurwa. Nokudaro mamwe mapurisa enyika.
Nyaya yaAnn Faber naMichael P. saka inononoka seawa iri mumhepo uye inoratidzika zvakasimba kuti nyaya yakave yakarongedzwa pamwero mukuru pamwe nekubatanidzwa kwehutongi, vezvematongerwo enyika uye vezvematongerwo enyika kuti vaite chete nemitemo mitsva iyo haimbozogamuchirwi nevanhu. Nokutamba vanhu zvikuru pamanzwiro, vanhu vazhinji vanogutsikana kuti vari kufarira kuchinja kwakadaro kwemutemo, nokuti munhu wose anoubatanidza nemhuka Michael P.
Vhidhiyo vakatitsigira kuti zvose zvaizova zvechokwadi, asi hatizombokwanisi kuzviongorora isu uye tinofanira kufunga kuti hatisi kutamba neHollywood techniques. Chigumisiro ndechokuti vanhu vanogona kubviswa pfungwa dzepfungwa pasina chikonzero uye vanogona kuparara mumhosva yavo yese upenyu hwavo, nokuti mutemo hauna kuvadzivirira zvakare.
Uye zvakadini naJulie van Espen naSteve B.?
Chimwe chinhu chakangoerekana chakamira mumutsara waStever B. yaiva yenyaya inotevera vrt.be:
Maererano nemashoko edu, zvifananidzo zvingadai zvakave zvidhori muhutsva hwekutsvakurudza vasati vagoverwa semuongorori wekutsvaga (ona mufananidzo uri pasi apa, asiya mufananidzo wakafukidzwa nemifananidzo-kurudyi mufananidzo wekamera yekare). Mapurisa aizoziva kuti akanga asiri "chapupu".
Sei mapurisa "akadzinga bhasika iro Steve B. aive akatakura" muchido chekutsvakurudza? Iwe unogona kutaura kuti vakazviita kuitira kuti vasatombomira chero zvapupu, asi iwe unogonawo kutaura kuti vakange vagara vachiziva kuti Steve B. angave akabatanidzwa naJudlie asipo nokuti akanga achifamba-famba nebhasiki yake . Iwe unogonawo kuti: tinoona pano hupenyu huno uchapupu hwekuti nyore sei mifananidzo inogona kushandiswa uye tinoonawo pano uchapupu hwekuti izvi zviri kuitika.
Chimwe chakanga chiri chinotonyanya kukosha ndechokuti akanga asiri baba veavo vakataura, asi baba baba. Muchiitiko cheAin Faber takaona babamunini avo ndivo vakatanga kutaura. Pakazopedzisira vabereki vakatanga kuonekwa. Ndinoramba ndichiratidza chisarudzo chekudzikisa uye vanoita, apo mifananidzo inogona kushandiswa kurarama uye chiso chitsva chinogona kuiswa nyore mubvunzurudzo (kusanganisira izwi rinoputira). Isocial media troll hondo iyo yakagadzirira kutaura "chaiva shamwari ye kana zivo ye .."Anofunga kuti vanhu vakawanda vanobvisa kusava nechokwadi kwekupedzisira.
Mukutsvaga Julie, kudanwa kukuru kwakagadzirwawo kuti vagari vatsvakurwe. Izvi zvinotarisirwa kuita kuti hutano hwevanhu huve hukuru hwakanaka uye kuisa pfungwa dzose kune vanhu panyaya iyi. Zvechokwadi mutadzi uyu anowiriwo ane kubatwa kwepabonde uye naizvozvo unogona kuzvitora zvishoma kuti tiri pano zvakare Dambudziko, Reaction, Solution ona chiito, nemitemo mitsva (uyewo muBelgium) iyo munhu wose anogona kuchengetedza kwenguva yakareba kana kuisa kurapwa kwepfungwa (kana chiremba wepfungwa anofunga izvi zvichidikanwa kana kwete). The Default.be inoshuma kuti:
"Dare rakapa mutongi wacho mhosva yemakore mana nokuda kwekubata chibharo uye kuba." Ndizvo zvazvakaita makore anenge maviri apfuura, musi wa 30 June 2017, kuAntwerp Court. Asi Steve B. haana kuenda kujeri zuva iroro. Mutongi uyu akakumbira kuti asungwe, asi dare harina kupindura izvi.
B. uyewo akakurudzira chivimbo chake. Somugumisiro, akanga asiri wekupedzisira uye akaramba akasununguka kusvikira kutongwa kwacho kuchikumbirwa.
Anini anopupura kuti, nokuda kwake, akasunungurwa mune zvimwe zviitiko. "Mudzidzisi wake wepfungwa akauya kuzotaura neni," anodaro mukadzi, uyo anoda kuramba asingazivikanwi. "Haana kuona Steve semhosva. Mukomana uyo anongoda rubatsiro, akafunga. Uye kana tikakwanisa kumupa iye? Takaita izvozvo. "
Mune izvi unogona chaizvo kutotangamhinduroverenga. Zvichida mushure menyaya iyi vanhu vachave nechokwadi nezvekuguma kwekusunungurwa pavanenge vachipa chikwata uye mutongi (kwete, asi 1 chete) anofanira kutonga kana kana munhu asina kuvharwa muchechi. Kuti mitemo yakadaro inogona kuchinja munhu wose inoputika nemafungiro emafungiro ayo vanhu vakawanda vanofunga (PsyOp) mhosva inoitwa.
Pindura mubvunzo mubhuku
Kumubvunzo kubva pamusoro unoti "Ko vhidhiyo inoshanda nevanyori vanyori uye vanotengesa PsyOp mabasa seizvi zvichiitika neTV?", Mhinduro yacho inogona kungova YES. Ichokwadi kuti kune vanhu vashomanana vane bhotela pamisoro yavo, asi mukudzoka vanhu avo vane mukana wekubhadhara kana vanogona kuzvidana ivo mabhiriyoniire uye vanonakidzwa nezvose zvavanofarira. Iwe hauzive; iwe haugoni kuzviongorora; iwe haugone kuwana munwe wako pairi kusvikira mumwe munhu akambosimuka uye anobudisa zvinhu zvose kubva mukati. Zvisinei, mukana wekuti izvi zvichaitika zviduku, nokuti vatori vechikamu vangangodaro vasina mavara. Uyezve, zvose zvishoma-nzvimbo dzePsychological Operation zvingangove zvakagadziridzwa zvokuti vakawanda havazivi kuti ivo chikamu cheSpyOp script.
Julie van Espen, muBelgium Anne Faber uye muurayi Steve B. weBelgium Michael P. muneiyo yazvino PsyOp?
Mushure mokunge Thijs H., Bhuku raEdith Schipper rekucherechedza, rakarambwa muhurumende yapfuura, richagamuchirwa nemunhu wose
IIsmail Ilgun vlogger war inongova chiito chekudzivisa mumugwagwa filming
Ndeipi inonyanya kufanana nemutambo wekushorwa kunodzorwa?
Uchapupu hwekuti humwe humwe humwe hutachiona hwemashoko huri kurwisana
Tags: ai, ANP, de, dzikadzika, deepfakes, imbwa, Featured, firimu, film script, film scripts, GAN, John, Mo, operation, kushanda, vaparidzi. psyop, mupfungwa, chinyorwa, Software, ari, tv, wag
Pamusoro Author (Munyori Nhoroondo)
Martin Vrijland akanyora kuti:
16 May 2019 pa 06: 52
Mumwe muenzaniso we ((kunyanya) PsyOp, Thijs H.
Uye imwezve pano:
(chinangwa: zvombo zvose zvinofanira kurambidzwa, kusanganisira crossbows)
Pinda mukati kuti upindure
16 May 2019 pa 06: 54
Kunyangwe nhau dzakawanda dzinonyengedza kusimbisa mutemo wakatangwa?
John.S akanyora kuti:
16 May 2019 pa 14: 04
Iwe unofungei nezveizvi, klasi yekutanga PsyOp:
Camera 2 akanyora kuti:
17 May 2019 pa 13: 22
Zvechokwadi nhau isingazivikanwi zvakare, sokuti Sam G akatove akasunga kwemazuva matatu kunyange! Zvadaro bhomba raive rave rava kuputika nechisimba uye murimi wezvinotyisa anonyatsoziva nezvazvo, hapana imwe nzira, inofanira kunge yakaudzwa.
Uye kunze kweizvozvo iwe unoramba uine zvitsva zvitsva pamasuo ose uye zvakadaro uye iye zvakare ane kemo yeawa
vanhu vanoita zvakawanda pamari, isu tave tawana
16 May 2019 pa 14: 07
Iwe webhusaiti yeRtvUtrecht ichangobva kubudisa PsyOp news. Ivo vakaoma pairi uye vanoedza kutungamirira vaverengi vatsauka.
Danny akanyora kuti:
16 May 2019 pa 19: 07
Zvechokwadi zvakanaka nyaya zvakare.
Mutongo wokupedzisira mune kunyanya kukoshawo.
Zvinowanzouya pano paiti ino ndevhidhiyo ye hypnotist inoita kuti vanhu vatende kuti mandimu yakasviba inonaka semango inonaka kana chimwe chinhu chakafanana.
Ikokunyengedza kwechokwadi unoziva kuti izvo hazvisi chokwadi, asi munhu anonyatsofunga kuti achadya mango inotapira uye acharamba achireva kuti ari kudya mango inonaka nokuti anotenda chaizvoizvo kuti
Pamusana pemaitiro aya, aya "anowanzobatsira" anogona kushandiswa.
Saka iwe une ma-hypnotist uye anotengesa kana kusanganiswa kwezviviri.
Wilfred Bakker akanyora kuti:
17 May 2019 pa 10: 02
Zvakanaka kuverenga kuti iwe uchagara kwechinguva, zvinhu zviri kuenda nekukurumidza ikozvino kuti kujeka kwezvinhu zvinouya zvatinomirira zvinodiwa zvikuru.
Kwete zvachose nehurukuro iyi ndiyo inofanirwa, mukomana uyo anotamba neavo vanogara mumugwagwa wake, guts kuti ataure.
Isiraeri vachitengesa nyika, iwe unongotya.
Karel Reuterz akanyora kuti:
17 May 2019 pa 10: 28
Hungu, ini ndinotenda zvechokwadi. Izvo zvipembenene zvinotyisa zvesimba hazvizonyadziswi nechinhu chipi nechipi.
Hondo zvinyorwa zvakanyorwa, mabhuku aita nemaune uye akaumbwa (documentary attached)
Ndezvipi zviri nyore ipapo? kunyora zvinyorwa zvemitemo inokosha mukuda kwesimba. Dare iri riri kuwedzera muhuwandu huzhinji, iyo inodzinga nyaya dzaF Faber nhau dzezvakaipa.
minute 1-12.47 mune iyi super docu >>>>>>>>>>
Iye zvino anotaura kuti tave pakati nepakati kumabvazuva uye kunyange zviitiko zvikaitika ikozvino, kutengesa
yehuwandu ikozvino zviri nyore uye yakanyatsobatsira nekubatsirwa kwezvimwe zvigadzirwa zvemagetsi uye asi vanhu
muzvikamu zvakasiyana zvenyika ine radicaly ruzivo rwakafanana pamusoro peani ari kurwisana ani .......... Ndivanaani vanobatanidzwa?
Saka, kana zvichikwanisa kunyengedza vanhu pamusoro pezviitiko zviri kuitika pamberi peziso ravo, zvingava nyore sei kuvapengesa pamusoro pezvinhu 100 zvitatu zvemakore akapfuura.
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM akanyora kuti:
17 May 2019 pa 23: 51
020 msm kugumbusa! nhau dzakaipa
Sei uchida kuziva izvi? akanyora kuti:
22 May 2019 pa 21: 17
Zvinonakidza kuti chidimbu pamusoro pemavhidhiyo akakwirira anonyatsoratidzwa naPutin. Heano chimwe chimwe, asi kubva mune zvemashoko makuru:
Vanhu vari kugadzirira zvishoma nezvishoma kuti vatarise terevhizheni here?
12 June 2019 pa 19: 29
Zuva rakanaka 9-11 Journaal Nederland
Zvipfumbamwe gumi nemana, zvichida zvakare inyanzvi pSY-OPP? Kuti Heineken kubira, kunyora script
uye ikozvino maitiro anogona kubvunza mibvunzo pamusoro peActor Holleeder muHet Parool, yakanaka
Iwe unofanira log in kuti tikwanise kutumira mhinduro.
« Nguva yekudzima webusaiti iyi? UPENYU 15-05-2019
Chokwadi chakanyanya hachipo? »
Vashanyi paJuly 2017
Total Visits: 13.062.137
Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'
Varimi vanoratidzira: varimi vanoteerera kuti vatungamiriri vekuratidzira havasi vashandi vehurumende
Ruinerwold Drenthe nemhuri yake, inotevera kushanda kwepfungwa (PsyOp) vakananga kune mamwe mapurisa ehurumende
Kupararira Kupandukira uye kudana kwemitero yakakwira uye yakazara kutonga pamusoro pezvese zvehupenyu hwako
Extinction Rebellion director Margaret Klein Salamon: "Chinhanho chinotevera ndechekunyepedzera kuti zvokwadi ndeyechokwadi"
guppy op Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'
SalmonInClick op Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'
Martin Vrijland op Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'
Zuva rezuva rinoshandiswa ne e-mail
Itai 1.649 vamwe vanyori
© 2019 Martin Vrijland. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Musoro naSolostream.